ICroatia: Inyikima engu-6.0 inyikima iSixeko saseZagreb
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » ICroatia: Inyikima engu-6.0 inyikima iSixeko saseZagreb
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziseCroatia • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Matshi 22, 2020
Inyikima enkulu eyi-6.0 inyikimise nje iSixeko saseZagreb eCroatia ngo-7.24 kusasa ngeCawe. Iziko le-epic lalibekwe kwi-7 km ukusuka kumbindi wesixeko. Kamva i-USGS yanciphisa inyikima ibe ngu-5.4 kwaye yalinganisa i-yellow.
Isilumkiso esimthubi malunga nokushukuma okunxulumene nokushukuma. Abanye abantu abonzakeleyo banokwenzeka kwaye iimpembelelo kufuneka zibekwe kwindawo ethile. Iziganeko zangaphambili ezikule nqanaba lokulumkisa ziye zafuna impendulo yenqanaba lengingqi okanye lommandla.
Mthubi ithathwa njengomeleleyo: Zagreb, Jankomir, Donja Bistra, Donja Stubica ziyenziwa.
UPetra Orescovic wathi: “Inyikima enkulu in Khroweyishiya 10 min eyadlulayo. Ndiziva ngathi kukuphela kwehlabathi. ”
UArana uthe: “Siyaphila, khange ihlale ixesha elide kwaye akukho nto yawa phantsi okanye yaphuka. Kwakuyeyona nto inamandla endakha ndaziva ebomini bam. ”
"Ndoda ndivela eMaribor Slovenia (ke nokuba ayikufutshane kangako) kwaye ndivuke yonke into ingxola, yeyiphi indlela yokuvuka .. loo nto inokuba ibisoyikisa, ngakumbi kwizakhiwo ezide ezikufutshane / kufutshane Zagreb ”
"Idolophu encinci eyi-40km ukusuka Zagreb. Indlu yam yonke yayingcangcazela, umandlalo wam ubungathi ngumboniso bhanyabhanya owoyikekayo. ”
Ngokutsho kwabafundi bendawo akukho ngxelo zokufa kwabantu kodwa umonakalo 'obonakalayo' wezinto eziphathekayo. Ewe, abantu phaya babeyidinga inyikima ngelixa behleli emakhayeni abo kude nale ntsholongwane… ”
U-2020 uphawula isikhumbuzo seminyaka eli-140 yenyikima enkulu yaseZagreb eCroatia. Intsomi ithi qho emva kweminyaka eli-140 kwehla intlekele eZagreb. Inyikima yowe-1880 yadiliza ikhedarethi yenkulungwane ye-13 ethi namhlanje ikhanye ngendlela entsha. Silinde ngolangazelelo unyaka wama-2021…
IZagreb, ikomkhulu lasentshona-ntshona laseCroatia, yahlulahlulwe ngokwakhiwa kwayo ngenkulungwane ye-18 neye-19 iAustro-Hungary. Kwiziko layo, iDolophu ePhezulu yindawo ye-Gothic, iZagreb Cathedral enamawele kunye ne-13th St Church's Church, enophahla olunemibala
Eli libali elivelayo kwaye liya kuhlaziywa.